Umphathi Weziteshi Ezintsha Zomkhakha Wezihambi | Iziteshi zeZeevou
Abaphathi besiteshi bangakusiza ukwandisa ukuhlala kwakho. Ubusuku obungenalutho yimali ephonswa phansi edreyini. Kodwa-ke, uma kuya kokunye ukweqisa, futhi uthola ukubhuka okumbalwa kakhulu, ugcina ngokubhuka okuphindwe kabili. Umphathi wesiteshi omuhle angakusiza ukwandise ukufinyelela kwakho (ngakho-ke ukuhlala kwakho), ngenkathi uqinisekisa ukuthi awubekeki ngokweqile.
Abaphathi besiteshi basondela kulolu daba ngezindlela ezahlukene. KwaZeevou, sisebenzisa ukuxhumana okunamandla, kwesikhathi sangempela, izindlela ezi-2 ze-API ezineziteshi ezingaphezu kwama-200. Lokhu kusivumela ukuthi sisabalalise amanani akho nokutholakala kwakho ngemizuzu embalwa kuzo zonke iziteshi zozakwethu. Lapho nje ukubhuka sekwenziwe, kuzogobhozela ngqo emuva kuZeevou futhi kuzodala udumo lwethu Inqubo Yokuqinisekisa Ukubhuka Yezinyathelo Ezi-5. Lokhu kukuvumela ukuthi uhlelise ukucubungula kwakho kokubhuka, ngaphandle kwesiteshi okwenziwe kuso ukubhuka.
Ngokushesha nje lapho ukubhuka kufinyelela ku-Zeevou kusuka kwesinye seziteshi, ngokushesha sibuyekeza zonke ezinye iziteshi ukubazisa ukuthi ukutholakala kwakho kushintshile. Lokhu kusho ukuthi iyunithi ngeke lisabhukha ku- eyakho iwebhusayithi, noma kwamanye amasayithi oxhumene nawo.
Ngezansi kunohlu lwezinye zeziteshi esihlanganisa nazo. Siphinde futhi sinikeze ukusebenza kwe-iCal kokungenisa nokuthekelisa uma kwenzeka ufuna ukuvumelanisa ukutholakala kwakho nama-OTA angaziwa kakhulu noma amasayithi wokufakwa kuhlu.